Ajụjụ - Toptag Technology Co., Ltd.
Wet / kpọrọ nkụ RFID Inlay
Akwụkwọ mmado RFID
RFID Anti-adịgboroja Labels
RFID Uwe Uwe
RFID ọla Tag
RFID Ọba Mkpado
RFID Akpado Pụrụ Iche
Emegide RFID Metal Tag
RFID Gas sịlịnda Tag
RFID na-asa ákwà Tag
RFID Ntu Tag
RFID Akara Tag
RFID Waste Bin Kpido
Njikwa Anumanu RFID
Anumanu / Pet Microchip
Microchip nyocha / Reader
RFID Ntị Kpido
Mgbaaka Nri Nduru
RFID igbochi Kaadị
Gịnị bụ RFID
Nchọpụta redio ugboro ugboro, ma ọ bụ RFID, bụ okwu ọnụọgụ nke teknụzụ na-eji ebili mmiri redio amata ndị mmadụ ma ọ bụ ihe. E nwere ọtụtụ ụzọ eji amata mmadụ, mana nke kachasị bụ ichekwa nọmba ọnụọgụ nke na-achọpụta mmadụ ma ọ bụ ihe, yana ikekwe ozi ndị ọzọ, na microchip nke etinyere na antenna (mgbawa na antenna ahụ ọnụ ka a na-akpọ transpondor RFID ma ọ bụ mkpado RFID). Antenna ahụ na - enyere aka mgbawa iji nyefe onye na - agụ ya ihe ọmụma njirimara. Onye na-agụ ya na-agbanwegharị ebili redio ahụ gosipụtara site na mkpado RFID gaa na ozi dijitalụ nke nwere ike ịfefe na kọmputa nwere ike iji ya.
Olee otu ihe RFID usoro na-arụ ọrụ?
Usoro RFID nwere mkpado, nke mebere microchip na poolu, yana onye na-ajụ ajụjụ ma ọ bụ onye na-agụ ya na antenna. Onye na-agụ ya na-ezipụ ebili mmiri akpa. A na-ege antenna mkpado iji nweta ebili mmiri ndị a. A n'ebubo RFID mkpado na-adọta ike site n'ọhịa kere site na-agụ ma na-eji ya ike microchip na sekit na sekit. Mgbawa ahụ na-agbanwegharị ebili mmiri nke mkpado na-ezigaghachi na onye na-agụ ya ma onye na-agụ ya na-agbanwegharị ebili mmiri ọhụrụ ahụ n'ime data dijitalụ
Gịnị mere RFID ji dị mma karịa iji koodu mmanya?
RFID idịghe "mma" karịa koodu mmanya. Ha abụọ bụ teknụzụ dị iche iche ma nwee ngwa dị iche iche, nke na-agabiga oge ụfọdụ. Nnukwu ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ koodu akara bụ akara teknụzụ. Nke ahụ bụ, nyocha ga-ahụ "koodu" mmanya ka ọ gụọ ya, nke pụtara na ndị mmadụ na-enwetakarị akara koodu mmanya n'ebe nyocha maka ya ka ọ gụọ. Nchọpụta ugboro ugboro redio, n'ụzọ dị iche, achọghị nhụ anya. Enwere ike ịgụ mkpado RFID ma ọ bụrụhaala na ha nọ na ntanetị. Ogwe koodu nwere adịghị ike ndị ọzọ. Ọ bụrụ na akara ejiri dọka, metọọ ma ọ bụ daa, enweghị ụzọ iji nyochaa ihe ahụ. Koodu ogwe osisi na-amata naanị onye nrụpụta na ngwaahịa, ọ bụghị ihe pụrụ iche. Koodu mmanya na otu katọn mmiri ara ehi bụ otu ihe ahụ ọ bụla, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịmata nke nwere ike ibu ụzọ gafee ụbọchị njedebe ya.
Kedu ihe dị iche n'etiti etiti dị ala, nke dị elu, na nke kachasị elu?
Dị nnọọ ka redio gị ga-esi na ụda olu dị iche iche iji nụ ọwa dị iche iche, mkpado RFID na ndị na-agụ ya ga-ege ntị n'otu oge iji kpọtụrụ. Usoro RFID na-eji ọtụtụ oge dị iche iche, mana n'ozuzu ha kachasị dị ala (gburugburu 125 KHz), dị elu (13.56 MHz) na oke ọkụ, ma ọ bụ UHF (850-900 MHz). A na-ejikwa ngwa ndakwa nri (2.45 GHz) na ụfọdụ ngwa. Ebili mmiri redio na-akpa àgwà dị iche iche na oge dị iche iche, yabụ ị ga-ahọrọ akara ngosi kwesịrị ekwesị maka ngwa ziri ezi.
Kedu ka m ga-esi mara ugboro ole dị mma maka itinye akwụkwọ m?
Ugboro dị iche iche nwere njirimara dị iche iche na-eme ka ha baa uru maka ngwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mkpado ala dị ala dị ọnụ ala karịa mkpado ọkụ dị elu (UHF) dị elu, jiri obere ike wee nwee ike ịbanye n'ime ihe ndị na-abụghị nke ọla. Ha dị mma maka nyochaa ihe nwere nnukwu mmiri, dị ka mkpụrụ osisi, na nso nso. UHF frequencies na-enye mma karịa ma nwee ike ịnyefe data ngwa ngwa. Ma ha na-ejikarị ike ha eme ihe, ọ ga-abụ na ha agaghị agafe ihe onwunwe. Na n'ihi na ha na - achọ 'iduzi' ya, ha chọrọ ụzọ doro anya n'etiti mkpado na agụ. Mkpado UHF nwere ike ịka mma maka igbe nyocha nke ngwa ahịa ka ha na-agafe n'ọnụ ụzọ mmiri banye n'ụlọ nkwakọba ihe. Ọ ga-akachasị mma ịrụ ọrụ na onye ndụmọdụ, onye na-emekọrịta ihe ma ọ bụ onye na-ere ahịa nwere ike inyere gị aka ịhọrọ oge kwesịrị ekwesị maka ngwa gị
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ maka afọ ojuju anyị na ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu ndị ahịa niile na afọ ojuju onye ọ bụla
140lọ 1401, ZhuJiang International Center, LongXiang Avenue, LongGang District, Shenzhen, China 518172.
Nchịkọta nkwakọ ngwaahịa nwere ọgụgụ isi maka ngwaahịa nchekwa ahụike na ahụike
Recresco na-eji sistemụ mkpu mkpuchi RFID na ụlọ ọrụ nrụpụta iji belata ihe ọghọm nke nkwekọrịta n'etiti ndị mmadụ na ụgbọ ala